घर MANAGERS सैंटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रबन्धक प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो उपनाम "इंडिकोटो"। हाम्रो सैंटियागो सोलोरी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बिद्यार्थी तथ्यले तपाईलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मितिको अन्तराल सम्म। विश्लेषणमा आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि भएको छ।
हो, सबैले रियल मैड्रिडको साथ आफ्नो प्रबन्धकीय भूमिकाबारे जान्दछन्। तथापि, केवल केहि केहि स्यान्टियागो सोलोरी जीवनी को बारे मा विचार छ जो एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम सैंटियोगो हर्नन सोलोरी पोगगियो हो। सैंटियागो सल्ारी को7मा 1976 मा अक्टोबर को XNUMXth मा आफ्नो पिता, ईडर्डो सोलोरी र मा आमा, रोजारियो मा एलिसिया सुसेना पोगगियो, अर्जेन्टिना अर्जुन अर्जुन अर्जेन्टिनामा जन्मेको थियो। उनको जन्मको जन्म पनि जन्मस्थानको लिओनेल मेस्सी.
स्यान्टियागोले आफ्नो आमाबाबुसँग एक्लै बढेको थिएन। उहाँले आफ्नो चार भाइबहिनीहरू सँगै हुनुभयो; Esteban, डेविड, मार्टिन्स र लिज सोलारी। सोलोरी एक खेलकुद परिवारमा जन्मिएको थियो। यसको फुटबलिंग स्टक को एक परिवार फुटबल जीन संग उनको पुरुष पुरुष को 80% भन्दा अधिक मा निहित छ, जसमा उनको विस्तारित परिवार शामिल छ।
बच्चाको रूपमा प्रारम्भिक, यो सान्टियागोको कम्युनिस्टमा आफ्नो जीवन तय गर्न सजिलो भयो। यो आश्चर्यचकित थिएन किनकि बुबाको परिवारबाट जीवन बिताउँथ्यो। आश्चर्यजनक कुरा, सेन्टगोगोले उमेरको उमेरमा पेशेवर जाँदा कहिल्यै गम्भीर छैन। जबकि फुटबल स्टक भन्दा धेरै फुटबलरले6उमेरमा आफ्नो करियर सुरु गर्दछन्, युवा स्यालरीले कहिलेकाहीं फुटबलको रूपमा फुटबल गम्भीरता लिएनन्। एकदिन केहि दिन सम्म उहाँ फुटबल खेल्नुभयो।
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- फुटबल यात्रा कसरी भयो
यो 1994 को गर्मी, र त्यो स्मरणीय विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका को लात को बारे मा थियो। सउदी अरब राष्ट्रिय टोली एक सानो न्यू जर्सी कलेजको परिसरमा बस्यो (रिचर्ड स्टकटन कलेज अब स्टकटन विश्वविद्यालय) दक्षिण पूर्व फिलाडेल्फिया मा स्थित छ। टूर्नामेंट सैंटियागोको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो किनकि उनको सोलोरी परिवार सउदी अरब राष्ट्रिय टोलीको प्रभारी थिए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्यान्टियागोको बुबाको बुबा भाइ जर्ज "एल इंदियो"सोलोरी सऊदी टोलीको टाउको कोच थियो, जबकि उनको बुबा एडोडोरोले सहयोग गरे। तलको पुरानो उमेरका दुवै भाइहरूको फोटो हो।
पाँच हप्ताको प्रशिक्षण शिविरको दौडान सैंटियोगोले फुटबलमा एक क्यारियर उठाएर गहिरो विचार राखेका थिए। यो आफ्नो बुबा एडवर्डो र लेनिन पछि रिचर्ड स्टटटन मा अंशकालिक फुट फुटबल कोच (जहां सउदी टीम को शिविर) एक-दूसरे संग एक मित्रता को मित्रता विकसित भयो।
त्यस समयमा, लेनिन्हले माथि चित्र मा दायाँ दिए ईदर्डोको सुझाव दिएका थिए भने उनको 17-वर्षीय छोरा छोरा सान्टियागोले रिचर्ड स्टकटन मा एक सेमेस्टर कलेजमा भर्ती गर्न सक्थे र त्यहि समयले कलेजको लागि फुटबल खेलिरहेको थियो। सान्टियागो र तिनका बुबा एडवर्डोतोले यो कुरा बुझ्थ्यो कि उनीहरूलाई आवश्यक पर्दछ द्रुत आधार पहिले उनी फुटबल खेलाडीको संसारमा उभिए।
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सउदी सफलता
सान्टियागो एक छिटो फुटबलिङ आधार प्रदान गर्ने निर्णयमा सोलोरी परिवारले टिम लेन्नानालाई इनाम दिएका थिए। लेन्टेनलाई विश्व कप तैयारीको दौडान सऊदी अरबको प्रशिक्षण व्यवस्थापन गर्न अनुबंध दिइएपछि अनुपस्थिति छोड्न बाध्य भयो।
दुवै लेनिहान एक साथ सौरारी भाइहरु संग सऊदी अरब ले संयुक्त राज्य मा आफ्नो सबै भन्दा सफल विश्व कप को दौडने को लागि मदद।
सऊदी अरबका लागि, "सोला परिवार"उनीहरूको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका 1994 विश्व कप दौडको स्थायी प्रभावको लागि धन्यवाद सधैं तिनीहरूका हृदयमा रहनेछन्।
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पोस्ट-1994 विश्व कप
संयुक्त राज्य अमेरिका 1994 विश्व कप पछि, सैंटियागो सोलोरीले आफ्नो क्यारियर रिचर्ड स्टकटन कलेजको साथ शुरु गरे। पतली 17 वर्षीया बच्चाले डिम्यान3कलेज फुटबल खेल्नु भएको थियो टिम लेनिनलाई धन्यवाद, जसले नयाँ सल्लाहकार बन्नुभयो।
त्यो समयका लागि सैंटियागो सोलोरी प्ले हेर्न पर्याप्त भाग्यशालीहरूले एक कुशल र बुद्धिमानी खेलाडीलाई टेक्निकल रूपमा उपहार दिएका थिए। स्यान्टियागो को रूप मा देखा पर्यो जो आफ्नो विरोधियों को तुलना मा अलग स्तर मा खेल को पढ्न सक्छ।
निराशा मा, उनको प्रतिद्वंद्वी जसको उनले उसलाई खेत मा दंड दिए थियो उनलाई उनको फेंकने को बजाए उनको बेहतर क्षमता संग निपटने को कोशिश को बजाय।
"यो फुटबल अनुभव थिएन,"
स्यान्टियागो सोलरले भने फुटबल अमेरिका रिचर्ड स्टकटन (गोवल.एच रिपोर्ट) मा आफ्नो समय को 2001 मा।
"तर यो जीवनको बारेमा एक फरक संस्कार र सोचको फरक तरिका बारे जान्नको बारेमा जीवनको अनुभव थियो। यसले मेरो टाउको खोलेको छ र एक पेशेवर फुटबलर बनने इच्छा "
फुटबलको रूपमा, सेन्टियागोले कलेजमा अध्ययन गर्ने अवसरको प्रयोग गरे जहाँ उनले अंग्रेजीलाई अझ राम्रो सिके।
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि
किनभने त्यो त्यो राम्रो थियो, यो भर्खरै4महिना लिनको स्टकटोन टोलीसँग एक नयाँल ओल्ड बेन्जको साथको व्यावसायिक क्यामेराको अवसरमा फोन गरिरहेको थियो। नबिर्सनुहोस्, यो क्लब ल्याईयो लिओनेल मेस्सी। त्यही वर्ष 1995 मा, सोलोरीले आफ्नो युवा क्यारियरलाई राणाटोसेस्सिनीसँग गोल गर्न निर्णय गर्यो।
अरू फुटबल खेलाडीहरू र प्रबन्धकहरू जस्तै आफ्नो वर्ष अकादमी सेटअप चलाए जस्तो, यो केवल सफारी सहनशीलता2वर्ष समर्थक प्रणालीमा प्रवेश गर्नु अघि फुटबल लिनुभयो।
यस समयमा, अझै पनि 1995-1996 सीजनमा, सोलोरीले युरोपलाई बनाउनको लागि एकमात्र तरिकालाई एक ठूलो क्लबको रूपमा राख्न र ठूलो देशी देशलाई जित्ने थियो। उनले नदी प्लेट संग आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर शुरू गर्ने निर्णय गरे। अर्जेण्टिना क्लबमा, सोलारले 1996 को Libertadores कप जित्न क्लबको नेतृत्व गरेर उनको नाम बनाए। यसले युरोपलाई आफ्नो बाटो पुर्यायो।
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
1999 मा, स्यान्टियोगोले स्पेनमा एटलेटिको म्याड्रिडमा सामेल हुन अटलांटिक पार गर्यो। यो समय क्लब संघर्ष संघर्ष र रिलीजको पछाडि थियो। उनको खेलकुदको लागि धन्यबाद, रियल म्याड्रिडले एटलेटिको साथ एक वर्ष पछि मात्र उनको रुचि राख्यो।
रियल म्याड्रिडले सान्टिओगो सोलोरीको रिलीज क्लोज सक्रिय गर्न र उनलाई 2000 मा साइन इन गर्न संकोच गरेन, त्यहि वर्ष एटलेटिको रिगोलेज भयो। सैंटियागो सोलाडीले पाँचौं ऋषिहरूका लागि रियल (एक्सएनएक्सएक्स-एक्सएनएमएक्स) खेलेका थिए। Zidaneजो 2001 मा पुग्यो। उहाँ 'गलाक्टिको' युगको अत्यावश्यक सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… सोलोरीले यो कदम सुरु गरे जुन परिणाममा Zidane 2002 चैंपियंस लीग फाइनलमा लिभरकुसेन को विरुद्ध उनको प्रसिद्ध वॉली स्कोर। सहयोगीहरूले मौका सिर्जना गरे, सोलोरीले रियल म्याड्रिडका लागि धेरै शक्तिशाली लक्ष्य पनि बनाए। तलका केही लक्ष्यहरू हेर्नुहोस्;
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
उनको खेलकुदको समयमा, सोलारीको खेलकुद शैलीले स्पेनमा फुटबल ट्राफिसीहरू जितेन। उनको राम्रो लगत्तै पनि उसलाई एक ट्रफी छ।
वर्ष 2002 मा, फ्रान्सेली प्रीमियम केबल टेलिभिजन च्यानल, क्यानल + सैंटियागो को रूप मा "वर्षको सबैभन्दा कामुक खेलाडी"उनको अद्भुत सुन्दर लगत्तै धन्यवाद।
पुरस्कारको जवाफमा सैंटगोगो सल्ारीले भने।
"म मेरो लागि मतदान गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिन्छु, तर म पक्का छु कि यो ठिक छ," सोलोरी छोडे। "हामी देख्छौं कि मैले फिल्म छोड्दा अर्को क्यारियर प्रस्ताव गरेको छु। फुटबल "
सौरारीको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा पनि, अर्जेन्टिना एक पटक वर्णन गरिएको थियो सीएनएनa"अत्यधिक शिक्षित, अभिव्यक्ति, दार्शनिक र पुस्तकहरु को एक प्रेमी।" फुटबल खेल्ने सेवानिवृत्त भएपछि सोलोरीले स्पेनिस अखबारको लागि एक स्तम्भ लेखे एल पाइस.
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
आफ्नो परिवारका बाकी सदस्यहरूको विपरीत, सोलोरी तीव्र निजी हो र केवल उनी आफैंका पत्नी र बच्चाहरूको बारेमा विवरण राख्नुहोस्। वर्तमानमा, उनीसँग कुनै पनि देखिने सोशल मिडिया प्रोफाइल छैन। तर सान्टियागो सोलारीको पत्नी र बच्चाहरुका अफवाहहरू सधैं आउँदैनन्। रिपोर्ट अनुसार, सेन्टगोगो तीन बच्चाहरु संग विवाहित छन्।
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- फुटबलिंग पारिवारिक जीवन
उनको बुबा र चाचाको बारेमा थप: फुटबललाई दुई भाइहरू, जर्ज राउल र ईडर्डो माइगुलसँग व्यापारको रूपमा लिने जो सोलार परिवारको फुटबल आधार गठन भयो। दुबै भाइहरूलाई तल क्रमशः न्यूलका पुरानो केटाहरू र रोजारियो सेन्टरमा आफ्नो प्रारम्भिक फुटबल खेल्न थाले।
यद्यपि तिनीहरूले नौ वर्षको उमेरको फरक फरक फरकसँग एकसाथ खेल्न सकेन जुन तिनीहरूलाई अलग गरे। दुई भाइहरू बीच, जर्ज अधिक लोकप्रिय थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… जर्ज सल्ारी 1966 विश्व कप क्वार्टरफाइनलहरूमा इङ्गल्याण्ड विरुद्ध खेले। तल 1966 विश्व कप समयमा इंग्ल्याण्ड विरुद्ध फ्रिक्वेन्सी लिइएको छ।
मेक्सिको मा उनको खेलकुद क्यारियर को समयमा, जर्ज सोरीरी को उपनाम "एल इंदियो"। यो नाम सान्टियागो सोलोरीमा पारिएको थियो जुन अहिले उपनाम दिइएको छ "एल्इइइसेइटो"जसको अर्थ सानो भारतीय। सान्टियागोका पिता एडोर्डो माइगुल सोलारीले आफ्नो वर्षको उमेरमा रोजारियो सेन्ट्रल (वर्ष एक्सएनएमएक्सएक्स) मा आफ्नो क्यारियर शुरु गरे। तल खेल खेल्ने क्रममा सान्टियागोको बुबाको तस्बिर हो।
Eduardo दक्षिण अमेरिका (अर्जेंटीना र कोलम्बिया) मा उनको सबै वरिष्ठ कैरियर खेलाडी र वर्ष 1981 मा सेवानिवृत्त भयो।
सोलोरी परिवारले आफ्नो छोरीलाई विवाह गर्न आउँदा फुटबल गर्ने पति थिए। वर्ष 1992 मा, सान्टिओगोको चचेरे भाई नतालिया, जर्ज सोलोरीकी छोरीले तीन-पटक च्याम्पियन लीग विजेतालाई विवाह गरे, फर्नान्डो रेडोन्डो (तल चित्रित)। राउन्ड रियल म्याड्रिड र अर्जेण्टीना टोली को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
स्याटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- तत्काल परिवार सदस्य
सान्टियागोका भाइहरूमध्ये, एस्टेबेन एन्ड्रेज सल्लियर पोगगियो टानो चित्रण सबैभन्दा लोकप्रिय हो। अर्जेण्टिना प्रोफेसर फुटबलर 2nd जून, 1980 मा जन्मिएको थियो।
Esteban उनको क्यारियर समय को समयमा एक स्ट्राइकर खेलाडी र 120 र 2001 को बीच 2016 लक्ष्यहरु लाई अधिक रन बनाए। तल चित्रित डेविड ईदोर्डो सोलोरी पोगगोई सैंटियागोका भाइहरूबीच अर्को लोकप्रिय छ।
डेभिड मार्चको 21st मा भएको थियो, कोलम्बियाको बररक्कुल्ला शहरमा 1986। लेखनको समयमा, त्यो हालको लागि खेल्दछ Enosis नियन Paralimni FC मा साइप्रेरियन दोस्रो डिभिजन। मार्टिन सोलारी, जो कम जान्दछ को बारे मा सैंटियागो को सबै भन्दा सानो भाई हो। सान्टियागोको पत्नी र छोराछोरीहरू जस्तै, धेरै सानो स्यान्टियागो सोलारी आमाको नाममा जान्छ जुन अलीशिया सुसेना पोगगियोको नाममा जान्छ।
स्यान्टियागो सल्ारी बहिनीको बारेमा: लिज सोलोरी एक लोकप्रिय छ अर्जेन्टिना अभिनेत्रीले सुरुमा स्थानीय र विदेशी चलचित्रमा ठूलो हुनुअघि एक मोडेलको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरे।
लिज जुन 18, 1983, i मा जन्मिएको थियोn बारानक्युइला, कोलम्बिया। उनको जन्म समय उनको बुबाले कोलम्बियन टीममा काम गर्ने समयसँग मेल खान्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Santiago Solari बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।